नागरिकको मुहारमा मुस्कान भर्ने नै मेरो प्रमुख लक्ष्य : कार्की - Lumbini Times
864 views | लुम्बिनी टाइम्स संवाददाता | सोमबार, १८ मंसिर ।
तपाईंलाई किन भोट दिने ?
चुनावी अभियानका क्रममा मतदाताको प्रतिक्रिया के छ ? के भनेका छन् ?
हामी अहिले चुनावी अभियान लिएर आम मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छौं । हामी मतदाताको प्रतिक्रियाले उत्साहित पनि छौं । अहिले आम नागरिक प्रश्न गर्न थालेका छन् ? विगतमा दल र तिनका नेताहरुले बाँडेका आश्वासनको बारेमा प्रश्न गर्छन् । ती सपना किन पूरा हुन सकेनन् भनेर प्रश्न गर्छन् । हामी त्यसैको उत्तर दिँदै पारम्परिक राजनीतिको चरित्रको बारेमा मतदातालाई सम्झाउँदैछौं । अनि वैकल्पिक राजनीतिको बारेमा जानकारी दिंदै अबको राजनीतिक गन्तव्यको बारेमा बहस गर्दै हिंडेका छौं । यसमा आम नागरिकको अभिमत परिवर्तन, विकास र समृद्धिकै दिशातर्फ छ । आम नागरिक आफ्नो अवस्था बदलिएको हेर्न चाहन्छन् । यो देश समृद्ध बनेको देख्न चाहन्छन् । आफ्ना समस्या र दुःख हटेको हेर्न आतुर छन् ।
रुपन्देहीमा नयाँ शक्ति पार्टीको अवस्था कस्तो छ ?
स्थापनाकालका धेरै नेताहरुले पार्टी छाडे रे, रुपन्देहीमा कति मत आउने अनुमान छ ?
हेर्नुस् एउटा जिवन्त पार्टीमा मान्छेहरु आउने जाने निरन्तर भइ नै रहन्छ । अरु पार्टीहरुमा पनि मान्छेहरुको आउने जाने क्रम चलिनैरहेको छ । त्यसैले नयाँ शक्तिमा पनि यो क्रम चल्नु कुनै नौलो होइन । फेरि नयाँ शक्ति पार्टीको वैकल्पिक राजनीतिक यात्रा तत्कालका लागि होइन । यो भविष्यउन्मुख लामो यात्रा हो । अनि यो यात्रामा कतिपय पुराना सहयात्रीहरु थाक्नु स्वभाविक पनि हो । त्यसैले थाक्नेहरु बाहिरिने अनि ऊर्जाशील नयाँ अनुहारहरु पार्टीभित्र भित्रिने क्रम निरन्तर चलिनैरहन्छ ।
कठिन संघर्ष गरेर व्यवस्था परिर्वतनमा योगदान गरेका दलहरुलाई जित्न सक्नुहोला ?
हो, हामीले के स्वीकार गरेका छांै भने पुराना दलहरुको योगदान राजनीतिक व्यवस्था फेर्नका लागि भयो । त्यसका लागि उहाँहरु सबैलाई धन्यवाद छ । तर, अहिले व्यवस्था फेरिएसँगै राजनीतिको एजेण्डा फेरिएको छ । अब आम नागरिकको अवस्था फेर्ने बेला आएको छ । गरिबीको अवस्था, भ्रष्टाचारको अवस्था, बेरोजगारीको अवस्था फेर्ने बेला हो यो । त्यसैले हामी यो बदलिएको राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्नका लागि दलको शैली, संस्कार अनि चिन्तन प्रणाली नै फेरिनुपर्छ भनिरहेका छौं । त्यसैले त वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता महशुस भएको हो । अब हिजो जसरी राजनीति गरियो, त्यही तौरतरिका अनि शैली र विचारले राजनीति चल्दैन । अब परिवर्तन हुने बेला आइसकेको छ । हिजोको राजनीतिक साधन अनि साध्य बदलिएको छ त्यसैले अब नयाँलाई चुन्नुपर्छ । म आम नागरिकलाई पनि त्यही अपिल गर्न चाहन्छु ।
तपाईंको क्षेत्रका मतदाताको सबैभन्दा ठूलो समस्या के रहेछ ?
७. तपाईंका मतदाता सामु के कस्ता प्रतिबद्धताहरु छन् ?
मेरो राजनीतिक लक्ष्य भनेकै आम नागरिकको अवस्था फेर्ने हो । आर्थिक विकास, समृद्धि र प्रगति मार्फत आम नागरिकको मुहारमा मुस्कान भर्ने नै मेरो प्रमुख लक्ष्य हो । त्यसले म त्यही लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अग्रसर भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता आम मतदातासमक्ष जाहेर गर्दछु । म अरु पार्टीका उम्मेदवारहरुले जस्तो यो पनि बनाउँछु, त्यो पनि बनाउँछु भन्दिन ।
किनकि त्यो नियमित कार्यसूचिमा आउने कुरा हो । यहाँ सरकारको नियमित योजनालाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा राखेर मत माग्ने परिपाटी छ, जुन सिद्धान्ततः गलत हो भन्ने मेरो बुझाई छ । किनकि ती नियमित परियोजनाहरु जसको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ र सुरु हुने प्रक्रियामा छन् ती आयोजनाहरु यसै सञ्चालन हुन्छ नै । त्यसकारण अहिलेसम्म स्वीकृत भइसकेका विकास निर्माणका आयोजनाहरुलाई चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेर पार्टीहरुले त्यस्तो कुनै ठूलो काम गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन ।
हो, म के कुरामा प्रतिबद्धता जनाउँछु भने अब तोकिएको समयभित्र सबै निर्माणका कामहरु पूरा गर्न म प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछु । हरेक परियोजना तोकिएको समय र लागतमा पूरा गर्ने मेरो प्रतिबद्धता हो । यसका लागि ऐन कानूनमा विशेष संशोधन गर्न जरुरी छ भने पनि म त्यो काम सबैभन्दा पहिला गर्नेछु । अनि शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तन मेरो अर्को काम हुनेछ । सुशासन कायम गर्नका लागि नीतिगत र प्रशासनिक सुधार अर्को काम हो । समग्रमा म आफू सदाचार, सुशासन अनि असल शासनको पक्षमा काम गर्नेछु । यहि मेरो प्रतिबद्धता हो ।